खुमलटारमा बुहारीबीच लडाईं, तनावमा प्रचण्ड, जनताको प्रश्नः बुहारी सम्हाल्न नसक्नेले के देश बनाउँलान ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
मिडिया डबली प्रकाशित : बुधबार, मंसिर ५, २०७५
ललितपुर- प्रकाश दाहाल पत्नी सृजना त्रिपाठीले प्रकाशको ‘स्मृति पुस्तक’मा आफ्नो नाम नराखिएको प्रति आपत्ति जनाएकी छन् । यो प्रकरणले प्रचण्डको घरमा घर झगडा नै चर्किएको छ। यता बाहिर पनि बुहारी सम्हाल्न नसकेको भन्दै प्रचण्डको चर्को आलोचना भएको छ।
प्रकाशको प्रथम स्मृति दिवसको अवसर पारेर सोमबार खुमलटारस्थित उनकै निवासमा लोकार्पण गरिएको ‘स्मृति पुस्तक’मा आफ्नो नाम नभेट्दा आलो घाउमा नुन छर्केको आभाष भएको सृजनाले बताइन् ।
पुस्तकको अन्तिम पृष्ठमा प्रकाश दाहाल बारे संक्षिप्त परिचयमा आफूमाथि सौता आएकी बीना मगरको नाम पत्नीको नाममा उल्लेख गरेर आफ्नो नाम नभेटेपछि आफू निकै दुःखी भएको उनले बताइन् । ‘मैले जन्माएको छोरा हुने, मचाहिँ नहुने । कस्तो अचम्म’, सृजनाले भनिन्।
प्रकाशको संक्षिप्त परिचयमा सृजनातर्फका छोरा प्रसिद्धको नाम भने उल्लेख छ। ‘छोरालाई स्वीकार गर्नेले मलाई अस्विकार गर्नुको कारण भने बुझ्न् सकिन’, उनले थपिन्, ‘यसबारे ससुरालाई भेट्छु र यो प्रश्न सोध्छु ।’
‘जीवन साथी गुमाउदाको पीडा त कसरी सेलाउनु रु तर त्यही पीडामा नुनचुक छर्किनेहरु देखेर मन कुडिएको छ ।’ सृजनाले थपिन्, ‘सायद अहिलेसम्म ममाथि भएका अन्याय र प्रहारहरु विरुद्ध आवाज नउठाउँदा आज यतिसम्म देख्नुपरेको हो । अब म बोल्छु, चुप बस्दिन ।’